Chivakwa chekubatanidza uye chivakwa chechigadzirwa ndedzimwe nzira dzakanakisa dzekuita kuti webhusaiti yako ione. At Semalt, isu tinonzwisisa kuti wanga uchiedza kuti webhusaiti yako ione uye yepamusoro-chinzvimbo. Izvi ndizvo zvakanyanya chikonzero nei iwe uri pano. Asi zvinoita sezvisingaite pachako.
Izvi zvinongoreva kuti iwe unoda mabasa ayo Semalt inopa. Masevhisi edu anovimbisa kuti iwe unowana akawanda mabhatani anozoshandurwa kune vatengi pasina nguva, nemutengo unodhura. Isu hativimbe nemashiripiti kana basa rekufungidzira. Isu tinowana kuti basa riitwe semhedzisiro yehunyanzvi hwedu uye nekuzvipira kubasa redu. Kudos kune iyo inoshamisa SEO timu!
Isu tinopa dzakasiyana-siyana mapakeji anova nechokwadi chekuti iwe unowana sevhisi inosangana nezvido zvako zvakasiyana pasina kuwirirana. Kuvaka bhizinesi kana zita harina kumbobvira rave nyore. Isu tine chokwadi chekuti rakawanda rakabudirira bhizimusi semina uye hurukuro dzekukurudzira dzakakuudza kukosha kwazvakaita kuti uve nemhando, zita. Asi zvakawoma havasati vambokuudza kuti zvakaoma sei kugadza chinyorwa.
Nhasi, iwe une Semalt yekukubatsira iwe kuti rudzi rwako runyuke uye runomhanya nevanoziva mabasa avo vanoziva nzira dzakakodzera dzekuita kuti basa riitwe. Kana tapedza kushanda pane webhusaiti yako, isu tinovimbisa kuti iwe uchaona kuvandudza kukuru mune yako brand uye zvinongedzo kune yako webhusaiti.
Chii chinonzi chivakwa chekubatanidza?
Chivakwa chekubatanidza ndiwo maitiro ekuwana backlinks kubva kune mamwe mawebhusayithi. Kana iwe wave uchiverenga kuburikidza newebhusaiti yedu, backlinks inofanira kunge iri yeyakajairwa. Nekudaro, heino kududzirwa. Backlinks kana hyperlink inzira yevashandisi yekufamba kuenda kune webhusaiti yako kubva kune mamwe mawebhusayithi. Iyi nzira iri nyore yekuisa. Semalt inoita kuti webhusaiti yako yakanaka kwazvo mamwe mawebhusaiti akopa zvimwe zvemukati wako asi isa chinongedzo kune izvo zvepakutanga zviri pawebhusaiti yako. Izvi zvinoreva kuti vashandisi vanoshanyira iyo webhusaiti, tinya pane iyo link uye ivo vanotumirwa kune yako webhusaiti. Cheers, ndiye mumwe mushandisi akawedzerwa naSemalt.
Ngatiti iwe unotsvaga tsananguro yeSEO, uye watorwa kunowanikwa saiti "A," asi mukutaura dudziro nekukosha kweSEO, iwe unobvunzwa kuti tinya "pano" kuti udzidze zvimwe zvimwe. Kana iwe ukanyevera, unobva waendeswa kune webhusaiti itsva saSemalt. Izvi ndizvo zvinoitwa nehyplink kana backlink.
Injini dzekutsvaga dzinoshandisawo izvi zvinongedzo kukambaira pawebhu. Kana kiyi yemutsindo ikatsvaga, injini dzekutsvaga dzinoenda kubasa sezvo dzichitsvaga sarudzo yakanyanya. Asi heino chimwe chinhu chinoshamisa nezve backlinks, panzvimbo yemagetsi ekutsvaga kumira pane izvo zvavanoona sekunge zvakanakisa, ivo vanoenda zvakanyanya kuti vaongorore backlinks mune aya mawebhusaiti.
Nenzira iyi, webhusaiti yako inokodzera kutsvaga uye inowanzooneka pane yekutanga peji kana mhinduro dzaratidzwa. Asi kana usiri rombo rakanaka, iwe unowana zvimisikidzwa kuumba mamwe mawebhusaiti akaratidzwa kuitira kuti ugokwanisa kuidaidza kuti win-win mamiriro.
Nhasi, kune akawanda maitiro ekuvaka maalumendi, uye anosiyana mukuomerwa. Sevanyanzvi veSEO, tinoziva kuti dhizaini yekubatanidza ndeimwe yenzvimbo dzakaomesesa dzebasa redu. Kazhinji kazhinji kwete, vasiri-nyanzvi vanopedzisira voshandisa yakawanda yenguva yavo vachiedza kuti zviitike. Nechikonzero ichocho, iwe unofanirwa kusiyira iri basa kune timu yedu inoshamisa vanoziva maitiro ekugadzirisa uye kutarisa zvimwe zvinhu zvakakosha.
Hazvina kumbobvira nyore kuwana mamwe mawebhusaiti kuti akakucherese iwe seyakavimbika sosi. Mumusika wakakwikwidzana zvakadaro, zviri nyore kuita vavengi kupfuura vabati, asi kubatanidza kuvaka kunoramba iri imwe yedzakanakisa nzira yekugara pamberi pemakwikwi.
Sei chivakwa chehubatanidza chakakosha kune SEO optimization?
Iyo anatomy ye backlink
Kuti tinzwisise zvakakwana kukosha kwekuvakwa kwemaitiro, zvakakosha kuti isu titange tanzwisisa izvo zvekutanga zvezvakabatanidzwa izvi. Zvinhu zvakadai
Injini dzekutsvaga dzinoona sei zvinongedzo
Uye injini dzekutsvaga dzinodudzira sei izvi zvinongedzo
<a href=https://semalt.net> kubatanidza kuvaka uye mhando kuvaka </a>
Kutanga kweiyi tag yekubatanidza: iyi inonzi anchor tag uye inomiririrwa "a" inoratidzwa mumuenzaniso wakaratidzwa pamusoro. Iro rinovhura reki yekubatanidza uye rinotaurira injini yekutsvaga kuti iyi chinongedzo chinotevera kune imwe webhusaiti kana imwe peji.
Chibvumirano chinzvimbo. Iyo "herf" chidimbu inomiririra pamberi pewebhusaiti. Inomiririra hyperlink Referral, uye haifanire kungozvinamatira kune chete webhusaiti. Iyi hyperlink inogona kuva portal kune pikicha kana vhidhiyo kana faira yekuodha.
Anchor inoonekwa yeiyo link ndeye chidiki chidiki chebatanidza iyo muverengi anoona pane peji pane iyo link yavanoda kubaya kana ivo vachivhura iyo link. Izvi zvinyorwa zvinowanzo fomwa nenzira yakasarudzika yekuita kuti ibude kubva kune mamwe mavara. Kazhinji, iyo inomiririrwa mune yakajeka ruvara rwebhuruu iyo inobata maziso, ayo anoratidza kuti iri kudzvanya.
Kuvhara kweti tag yekubatanidza: iyo "</a>" inoratidza kupera kweteki yekubatanidza kune injini dzekutsvaga.
Ndeapi mukana wekuti backlinks ine injini dzekutsvaga?
Injini dzekutsvaga dzinoshandisa izvi zvinongedzo munzira imwe munzira mbiri.
Kuti uwane mapeji matsva ewebhu.
Kubatsira kuona kuti peji yakanyatsoita sei pamhedzisiro yayo.
Zvemukati zvemawebhusaiti izvi zvinotorwa uye zvinowedzerwa kune yavo indexe kamwe yekutsvaga injini zvinowana webhusaiti yako kuburikidza izvi zvinongedzo. Nenzira iyi, webhusaiti yako inoonekwa, uye kana ichinge yanangana nemhando yeinjini yekutsvaga, ichave inowanikwa. Pari kugadzira pfungwa dzavo pane kunaka uye chinzvimbo chewebsite yako, ivo havangotarisa zvemukati zvemukati. Ivo zvakare vanoisa iyo nhamba ye backlinks kune yako webhusaiti. Nhamba yakakwirira ye backlinks kazhinji inoreva kuti zvemukati zvinonyanya kubatsira, zvichiita kuti ive yepamberi yekutsvaga injini.
Kushandisa zvinongedzo sechinhu chinzvimbo ndechimwe chezvikonzero nei google yakatanga kutonga senge injini yekutsvaga muma1990.
Seve mabhizinesi madiki, kuvaka mhando hakutombo kuve nyore. Kusiyana nezvimwe zvinhu zvikuru, haunyanyo kuzivikanwa kunze kwenharaunda kana nharaunda. Asi kuti chero bhizinesi riwedzere kukura, iwe unofanirwa kuvaka zita remhando, zita rechinzvimbo. Funga nezveKFC, chero nguva iwe yaunonzwa zita, pfungwa dzako dzinokupa iyo yonke nhoroondo, kubva kumukuru kapu kusvika kune kuravira kwehuku. Ndiwo maitiro anoita rudzi rwevanhu.
Semalt inokupa iwe yakanyanya mikana uye mikana yekuita kuti yako brand izivikanwe. Sebhizimusi diki, Semalt anoona kuti iwe unoda rubatsiro rwese rwaungawana. Ichi ndicho chikonzero isu kupa zvakachipa masevhisi pamhando yepamusoro. Funga nezvazvo senzira yedu yekuratidza iwe isu tinoziva kushanda kwako.
Chako chako chakakosha asi kuti chizivikanwe kwakakomberedza chivharo, iwe unoda hukuru hukuru kupururudza kubva. Icho chikuva ndiSemalt pamwe neinjini yekutsvaga saGoogle. Nehunyanzvi hwedu uye webhusaiti yako paGoogle, idzo "imbwa huru" hadzisi mukana.
Mukuvandudza traffic, yako webhusaiti inowana, brark yakakosha. Izvi zvinodaro nekuti Google inogara ichipa mabhendi ekurapa. Kazhinji rudzi rwemhando inozowana zviri nani nemhando shoma. Imwe bhenefiti inoshamisa yekuvaka mhando paGoogle ndeyekuti webhusaiti yako iturikezve mushure mechinguva chidiki, kunyangwe kana uchirangwa nekuda kwekusaita kwakashata.
Asi mabhurukwa madiki haana izvozvo nyore. Nekuti iwe uri mutsva, haumbofi wawana rubatsiro rwekusahadzika. Uye shanda nesimba zvakanyanya kuti uwane chinzvimbo.
Kuvaka mhando kwakanyanya kuoma zvekuti zvinogona kutora makore zvisati zvaonekwa kana kuratidzwa muSERPs.
Hausati uine iyo yakareba iwe?
Mhinduro ichiri kuramba iri Semalt. Mukupedzisira, iwe unofanirwa kubvumirana kuti Semalt ndiyo yakachengeteka uye yakanakisa nzira yekuita zita rako kunze uko pasina kurasikirwa nehope kana mari.
Kuvaka mhando kuri nyore sezvakaoma. Neku hire vashandi, iwe unosvika pakuzorora uye isa zvese izvi zvakaoma basa pamumwe munhu. Kushandisa social media ndiyo imwe yedzakanakisa nzira dzekuvaka rudzi kana iwe ukafunga kuita izvi uri wega.
NeGoogle ichigadziridza Hwirudzuro Yayo Yemhando Yemaitiro kuti ishandise iyo EAT (inyanzvi yekusimbisa chivimbo), ikozvino tingaone kuti Google iri kuyedza kuona masosi / mapeji ayo anofanirwa kuoneka zvakanyanya mukutsvaga kwekutsvaga.
Pamhepo kutsikisa kwakafanana neyakajairwa tsika dzema SEO. Kuti uvake brand yakasimba, iwe unofanirwa kugadzirisa saiti yako nekuvapo kwako online. Kuti uwane zvakanyanya izvi, iwe unofanirwa kugadzirisa zvinhu zvaunoshandisa pane saiti uye izvo zvinhu zvaunoita kunze kwenzvimbo.
Nekuvaka mhando, iwe unofanirwa kufunga nezvako nezviri kutaurwa nevamwe pamusoro pezvako zvemukati. Ichi ndicho chikonzero kuwanda kwezvinhu zvepamusoro zveSEO zvinosanganiswa zvakakwana neyemukati mishambadziro kana iwe uchizoishandisa nenzira kwayo.